China Flat Metal Package fekitori uye vagadziri | Jitai
Flat simbi pasuru yakakamurwa kuita chimwe-chidimbu kana yakawanda-chidimbu chekusimbisa mhando.One-chidimbu chinotora yakadzika kudhirowa kwema modhi, akawanda-chidimbu anotora yekumisikidza furemu uye hwaro hwakasarudzika hwakagadziriswa. Iyo inotungamira nzira yekutungamira iri kuburikidza neparutivi rusvingo, inokodzera pamusoro pegomo gungano. .Kushandiswa kushandiswa mune imwechete-chidimbu wedunhu - musanganiswa wakasanganiswa masekete gungano.
* Pasuru inotora zvinhu zvekovar kana kutonhora kwakakwidibirwa simbi.Maumbirwo eakawanda-chidimbu ndeyekusimbisa yekushisa conductivity.Base inotora zvinhu zveWuCu, Oxgyen Yemahara Mhangura kana CRS1010 uye nezvimwe.
* Iyo kukwirira kwepakeji inotora zvinodiwa nevatengi.
* Pini dzakakamurwa kuita rectangular muchinjikwa chikamu chemakemikari kukurwa kwevhu kana kutenderera pini zvinoenderana nechimiro chemuchinjikwa chikamu zvinoenderana nesarudzo yevatengi.
* Iyo chinzvimbo chepini pini chinotemwa nevatengi 'zvido.
* Chivharo chakagadzirwa zvinoenderana nekuonekwa kwepakeji.
* Pasuru inofanirwa kuve electroplating kuti uwane yakavimbika chaiyo yekushandisa uye mutengi sarudza pasuru yakazara yakanamirwa pamubhedha Au kana inotungamira inosarudzika yakanamirwa pamuromo Au zvinoenderana nezvinodiwa.
* Dzese index dzinosangana nezvinodiwa zveGJB548B.
Chikamu Chechipiri: Sarudzo yezvinhu
Kusarudzwa kwezvinhu zvekugara
Iyo CTE chinhu chekutanga chinotorwa mukufungisisa, maitiro ekugadzirisa kushushikana kwepasi kunoda vashandi vekugadzira vane ruzivo rwakanaka rwekuita kwezvinhu zvakasiyana.Show in tablet 1 - piritsi 2 chirevo chekumanikidza kusimbisa kwezvinhu zvemapakeji mapakeji.
Nheyo yekugadzira yezvinhu zvakapfava pasuru
Mhango / Furemu
4J29 Mhangura yakaumbwa
4J50 4J50 Mhangura Tambo
Iwo musimboti wecompersion chisimbiso chezvinhu zvepakeji
Oxgyen Yemahara Mhangura
4J50 4J50 Mhangura
Paralle Kuiswa chisimbiso Welding: 4J42
Pashure: Iyo Simba Dzimba
Zvadaro: Iyo Platform Package